घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या ! « MNTVONLINE.COM
घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या !
दाङ । दाङमा एक जनाले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । जिल्लाको गढवा गाउँपालिका–२ महदेवाकी ४३ वर्षीया शिला चौधरीको आइतबार बिहान उनकै श्रीमानले धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
हत्या अभियोगमा ४० वर्षीय धनिराम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनिरामले घरायसी विवादमा शिलालाई धारिलो हतियार खुडा प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उपचारको लागि लमही अस्पताल दाङतर्फ लैजानेक्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको दाङ प्रहरीले जनाएको छ ।
लाइफलाइन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत सेजलको मृत्यु प्रकरणका आरोपित पक्राउ
लक्ष्मीलाई जिउँदै जलाउन खोज्ने श्रीमान् २० दिनपछि पक्राउ !
अनैतिक सम्बन्ध थाहापाएपछि श्रीमतीकै योजनामा माओवादी नेता पाण्डेको हत्या !
दम्पति हत्या आरोपित सात वर्षपछि पक्राउ !
लुटपाटका लागि धारिलो हतियार प्रहार गरी वृद्धको हत्या
आफ्नै भाइको हत्या आरोपमा दाजु पक्राउ